Home > Travel Europe > Top European Train Tours Ị Kwesịghị Miss
Top European Train Tours Ị Kwesịghị Miss
Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Ingbọ ologo Spain, Travel Europe
(Emelitere ikpeazụ On: 05/03/2021)
Ejegharị ejegharị n'ebe ọ bụla bụ mgbe ịtụnanya na anyị na-eme ya na-achọpụta mara mma n'obodo, akụkọ ihe mere eme nke a mba ma ọ bụ omenala dị iche na nke anyị. Otú ọ dị, ị na-adịghị na-aga n'ebe dị anya na achọpụta mma ebe. E nwere ihe ole na ole European ụgbọ okporo ígwè tours na a pụrụ iche amara nke na-doro anya na kwesịrị a ebe anyị njem chọrọ ndepụta. site maa mma European obodo na isi na ọgaranya akụkọ na omenala mmetụta, na-ewe oge iji na-achọpụta nke obodo ileta.
Isiokwu a na-dere ịkụziri banyere Train Travel na e mere site Save A Train Ndị dị ọnụ ala Train Tickets weebụsaịtị Na The World.
Lee ụfọdụ European ụgbọ okporo ígwè tours ị na-ekwesịghị ileghara:
Anyị na-aga a obere ọkụ ala, kpọmkwem, ndị mara mma na mpaghara nke Basque Country. N'ebe a, anyị na-ahụ ihe nke abụọ European isi obodo nke ọdịbendị bụ na 2016: San Sebastian. Nke a mara mma obodo dị n'ebe ugwu nke ụsọ oké osimiri mgbe niile n'elu ụwa chaatị dị iche iche n'ihi na ya gastronomic enye na ya na; nightlife. N'akụkụ aka nke ọzọ, Farisii, ọzọ na ntụsara bụ ihe ị ga-ada na ịhụnanya na-. Ọ bụ ọsọ ka chọta ihe banyere art, music, na-agba egwu na niile nkuku nke obodo. Ya mere, ọ bụ otu n'ime ndị kasị ukwuu na Spain na akụkụ nke anyị European ụgbọ okporo ígwè tours ileta na-anọ ụbọchị chọpụtara ya ebe kasị mma na rụchaa mgbede na a na-atọ ụtọ nri abalị na cocktails n'akụkụ oké osimiri.
Na obi nke Germany, banyere otu awa site na Berlin, e nwere obodo ọzọ ị na-ekwesịghị ileghara. Leipzig na-esiwanye abụrụ dị ka ndị kasị oge a na viable ọzọ ka isi obodo. Ikekwe, ọ bụ n'ihi na nke illustrious akụkọ ihe mere eme, jikọrọ aha dị ka Bach na Wagner; ma ọ bụ, ikekwe, n'ihi na ya na nnukwu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ oghere, ma meriri ada aka. Ọ nwekwara ike ịbụ maka ya jụụ mkpụrụ obi, ebe nkà na music ndị pụrụ iche. Dị ka mara mma European ụgbọ okporo ígwè tours gaa, onye a bụ n'ezie kwesịrị ya.
Bremen na Leipzig Ụgbọ oloko
Berlin na Leipzig Ụgbọ oloko
Hanover na Leipzig Ụgbọ oloko
Hamburg na Leipzig Ụgbọ oloko
The West Rhine Railway European Train Tours, Germany
N'ihi na onye ọ bụla hụrụ n'anya n'anya lush, knockout mma, castles, na anyanwụ dara na sara ubi vaịn, a sinik gbatia tinyere Rhine River bụ ebe ị ga-aga. The ụgbọ okporo ígwè n'agbata German obodo Cologne na Mainz bụ onye ị ga na-echeta ruo mgbe ebighị ebi ma na mgbe. Ya picture-zuru okè Okirikiri ga-ahapụ gị nkwusi nku ume! ezi romantics kwere na obi ụtọ endings na fairytale anwansi ga-akpọ isiala nye maa mma castles peeking site green ubi vaịn. The West Rhine ụgbọ okporo ígwè na-ụwa niile mara dị ka akụkụ nke "Ihunanya Rhine" njem, ma ọ bụrụ na ị nwetara onye ị hụrụ n'anya ga-tinyere, ime otú. Ị ga-agaghị echefu echefu oge, dị ka ọtụtụ ndị ọzọ ndị mere West Rhine Railway a part of their European train tours.
Cologne ka Mainz Ụgbọ oloko
Frankfurt ka Mainz Ụgbọ oloko
Berlin ka Mainz Ụgbọ oloko
Brussels ka Mainz Ụgbọ oloko
Lyon, Njem Ọzụzụ French nke French
Lyon mara mma bụ obodo nke atọ kacha buo ibu na France na ezi ike center nke mba. Ọ bụ maa a ọzọ liveable ma nọrọ jụụ ebe karịa ka isi obodo, àjà ntụrụndụ na n'akụkụ ọ bụla. Lyon nwere ya niile: ngosi ihe mgbe ochie, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, boutiques, na mbụ ụlọ ahịa, nakwa dị ka a ukwuu nke Ogwe na klọb. Ọ bụkwa a vibrant mahadum obodo, ruru a nleta gị European ụgbọ okporo ígwè tours. mara mma ụlọ -anọ na-Rhône River, nnukwu ogige, na gburugburu ebe na-etu ọnụ dị iche iche French omenala mmetụta - ihe ahụ abụghị na-n'anya?
Brussels ka Lyon Ụgbọ oloko
Paris na Lyon Ụgbọ oloko
Amsterdam to Lyon Highspeed Train
[https://www.youtube.comwatch?= Na mozmhlEKk0E
Ọ dịghị European ụgbọ okporo ígwè tours bụ ezu na-enweghị na-agba site na ọmarịcha Okirikiri nke Tuscany. Mpaghara a Central Italy na-enye breathtaking nlegharị anya ma na-enye nnọọ ihe a ole na ole ihe nke mmasị ị nnọọ ga-eleta. Site n'ihe ndị kasị iconic Renaissance art of Michelangelo na Botticelli mama Nature kasị mma ọrụ na Apennines, Tuscany bụ ebube. A ọma-zubere ụgbọ okporo ígwè tour nwere ike ile gị tinyere Tyrrhenian Sea n'ụsọ oké osimiri, ma ọ bụ ka ị na-ahụ famed ubi vaịn nke Chianti.
Milan ka Chianti Castellina Ụgbọ oloko
Florence na Chianti Castellina Ụgbọ oloko
Naples na Chianti Castellina Ụgbọ oloko
Rome ka Chianti Castellina Ụgbọ oloko
Save A Train na-enyere aka na ị akwụkwọ a ụgbọ okporo ígwè na-aga na 3 nkeji, na ndị dị ọnụ ala udu na napụla asọ anyị oyi ntinye akwụkwọ ụgwọ!
Ị chọrọ Embed anyị blog post gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftop-european-train-tours%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#travelfrance #Njem Train Travel travelgermany travelitaly
Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Train Travel Holland, Inzọ Njem Italytali, Train Travel The Netherlands, Train Travel UK, Travel Europe